မြန်မြန်အားသွင်းဖို. 2X BATTERY PRO - BATTERY SAVER APK V2.91 ~ Latha Mobile 0945 000 1727
မြန်မြန်အားသွင်းဖို. 2X BATTERY PRO - BATTERY SAVER APK V2.91
6:04 AM ko pae Lay No comments
မင်္ဂလာပါဗျာ ကျွန်တော်ဒီနေ.တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ Android သမားများ အကြိုက်တွေ.စေမဲ့ 2× battery saver လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဖုန်းအားသွင်းဖို. အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ပုံမှန်အားသွင်းနှုန်းကို နှစ်ဆ တိုးပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ နှစ်ဆ အားသွင်းပေးနိုင်လို. နှစ်ဆပြန်သုံးမယ်တော့မထင်လိုက်နဲ.နော် နာမည် ကိုက battery server ဆိုတဲ့ အတိုင်း လိုသလို ထိန်းချုပ်ထားလို.ရပါသေးတယ် Play Store မှာဝယ်ရင် တော့ ပိုက်ပိုက်ပေးရမှာပေ့ါဗျာ မယုံရင်ဒီမှာသွားကြည်. .........:P ဒီမှာတော့ အလကားရအောင် ရှာပေး ထားတာပါ သုံးဖူးသူတိုင်းလဲ သိကြမယ်ထင်ပါတယ် မသုံးဖူးသေးဘူးဆိုရင်လဲစမ်းသုံးကြည်.ဖို.အကြံပေး လိုက်ပါရစေ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းသွားလိုက်ပါ............အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ
Battery icon theme is changable.
Display battery usage and time since last unplugged, estimated battery run out time, battery health status, voltage, temperature, etc. information. http://s3.sfcdn.in/MjNlYmNiYTRlYWRiMDY0OGM3NDIzMzg1ZmMyNjlkYjczOTJmNjE0NToxV0d6V0E6WjZ6Zk1xUEdBT3JzZTFSNE9MbmdIdzVCZEE4/9376380d02/2x_Battery_Pro_-_Battery_Saver_v2.91.apk